Dogecoin Wallets: Etu esi etinye Wallets ndị ọrụ na GNU / Linux? | Site na Linux
Taa, anyị ga-abata ọzọ ụwa nke free na-emeghe software (ngwa) nmepe ke ubi nke Cryptocurrencies na DeFi. Kpọmkwem anyị ga-abanye n'ime Kedu ihe na otu esi etinye Wallets ndị ọrụ gọọmentị na GNU / Linux?
N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị nwere ike ikwenye ọzọ ma gaa n'ihu na-aba ezigbo uru, na-egosi na Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe, karịsịa ndị dabere na GNU / Linux, ha dị mma maka igwupụta / ịchekwa ihe dị iche iche Akụ Crypto dị, dị ka Bitcoin, Dogecoin, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
MinerGate: Etu esi wụnye Software Miner na GNU / Linux?
Na iji zuo ezu na isiokwu a ga-agwa ya na tupu ịbanye n'ụzọ zuru ezu n'ime ya, dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-akwado nke ahụ na ngwụcha ịgụ akwụkwọ aỌ bụrụ na isiokwu ahụ nwere nnukwu mmasị onwe onye na mpaghara a, gụọ ihe na-esonụ yiri posts nke ahụ ga-enyere nnukwu aka.
Ebe ọ bụ na, ha ga-achọta ha ọtụtụ ozi metụtara na:
Kedu sistemụ arụmọrụ yana ngwa adị ma enwere ike iji ya maka Digital Mining?
Etu esi edozi / megharia GNU / Linux Distros na mine / chekwaa Cryptoassets di iche?
Ngwaọrụ kachasị mma maka igwu egwu cryptocurrency
Otu esi egwuputa Dogecoins (Ntinye na ojiji)
Sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ maka Ngwuputa Dijitalụ
Ọrụ ebube: Obere Distro dabere na MX-Linux 17.1
1 Dogecoin Wallets: obere akpa
1.1 Kedu ihe na otu esi etinye Dogecoin Wallets na GNU / Linux?
1.1.1 Gịnị bụ Dogecoin?
1.1.2 Dogecoin Wallets: MultiDoge na Dogecoin Core
1.2 Muta ihe banyere Cryptocurrencies na DeFi
Dogecoin Wallets: obere akpa
Kedu ihe na otu esi etinye Dogecoin Wallets na GNU / Linux?
Tupu ikwu Kedu ihe ha bụ na etu esi etinye ha?, ọ dị mma ka dokwuo anya na, n'ihi na nnukwu iche iche nke GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ, n'ezie ị ga-achọ ịwụnye na / ma ọ bụ chịkọta ụfọdụ nchịkọta / ọba akwụkwọ dị mkpa n'ọdịnihu.
Na anyị bara uru ikpe, echichi nke "Dogecoin obere akpa" Ọ ga-eme na a Respin (Nbudata) omenala aha ya Ọrụ ebube GNU / Linux nke dabere na Linux MX ma wuo ya site na nke anyi «Na-eduga na Snapshot MX Linux» na kachasị maka Akụkụ Ngwongwo Crypto, na-esote n'ọtụtụ ndụmọdụ, ndị ahụ gụnyere n'akwụkwọ anyị akpọrọ «Tọghata GNU / Linux gị ka sistemụ arụmọrụ dabara maka Ngwuputa Ngwuputa».
Tọghata GNU / Linux gị ka sistemụ arụmọrụ dabara maka Ngwuputa Ngwuputa
Gịnị bụ Dogecoin?
Dị ka Ebe nrụọrụ weebụ Weebụ nke otu, a kọwara ya dị ka ndị a:
"Ebe mepere emepe, ego dijitalụ nke ọgbọ na-enye gị ohere izipu ego na ntanetị. Chee Dogecoin dị ka "ego ịntanetị."".
Dogecoin Wallets: MultiDoge na Dogecoin Core
N'otu oge na Dogecoin ọrụ saịtị, naanị ihe anyị ga-eme bụ ihe ndị a:
Pịa akara ngosi Linux n'okpuru ozi na-ekwu, sị: "Bido iji DOGECOIN TAA"
Wee budata otu ma ọ bụ ha abụọ "Dogecoin obere akpa" o Wallets / Pọọsụ iji wụnye ma jiri.
Na-esote, na n'ihe banyere MultiDoge, ozugbo ebudatara ma gbuo ya ".Jar faịlụ" ugbu a (ọtụtụ-0.1.7-linux.jar) na-eji Java ma ọ bụ OpenJDK, ihuenyo ndị dị n'okpuru na-egosi usoro ndị a:
Na-esote, na n'ihe banyere Dogecoin Isi, ozugbo ebudatara na unzipped na ".Tar.gz faịlụ" ugbu a (dogecoin-1.14.2-x86_64-linux-gnu.tar.gz) naanị mkpa igbu, site na ọnụ (njikwa) ihe "Dogecoin-qt faịlụ" , na ụzọ:
Dị ka nseta ihuenyo na-egosi, usoro ndị a:
Muta ihe banyere Cryptocurrencies na DeFi
Ee, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a ị chọrọ ịnọgide na-amụ obere ihe ọkachasị ngalaba nka na uzu a na-emeghe ma na-emeghe, anyị na-akwado ka inyocha akwụkwọ ndị a ọzọ:
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Dogecoin Wallets» ndị isi, nke ahụ bụ Kedu ihe na otu esi etinye Dogecoin Wallets na GNU / Linux?, bara ezigbo uru maka ndị na-eji sistemu arụmọrụ ha n'efu ma mepee iji gwupụta / chekwaa ha dị iche iche Akụ Cryptodị ka Dogecoin na ndị ọzọ, na nke ahụ bụkwa nke nnukwu mmasị na ịba uru, maka dum «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Dogecoin Wallets: Etu esi etinye Wallets ndị ọrụ na GNU / Linux?
GOS-P4: Inyocha Google Open Source - Nkebi 4